Soluble Lyophilized Silk Fibroin - China Simatech
Kpọọ Anyị: +86 0512-62756585
Silk Fibroin Ngwọta
Na situ akpụ Silk Fibroin jel Kit
Silk Fibroin akpụkpọ
News Ese Site Simatech
Ngwaahịa a nwere ike na-anụ ihe karịrị ọnwa 18 na ụlọ okpomọkụ. The regenerated silk ngwọta na-anọgide n'otu bughi mgbanwe ike si random eriri igwe andα-helix Ọdịdị ka β-mpempe akwụkwọ Ọdịdị dị ka mbụ silk ngwọta.
B rand aha: Fancci
Alternative aha: Ifriizi-Fikiere silk fibroin
Okwu Mmalite :
Large molekụla ibu silk fibroin na okenye ihe ngwọta nwere ike esichara n'ime dị iche iche siri ike ihe onwunwe formats. N'ụzọ dị mwute, dị ọcha silk ngwọta ike ịchekwa ma ọ bụ ụgbọ ruo ogologo oge dị ka silk dabara bughi mgbanwe na aggregates ruru thermodynamic akwusighi. Anyị proprietary lyophilized silk ngwaahịa kpamkpam edozi nsogbu ndị a na lyophilized silk nwere ike etisasịwo ke mmiri ma ọ bụ echekwa na elu ịta, Ọrụ downstream ihe onwunwe nhazi.
Lyophilized silk na a iko mkpọ ọnọde na-a na-acha ọcha porous ogbo. Ebe ọ bụ na vial kpamkpam kara akara, lyophilized silk pụrụ ịnọgide na-anụ maka a ogologo oge nke oge (> ọnwa 18) na ụlọ okpomọkụ na okwu nke anya, solubility, molekụla ibu nkesa na Ọdịdị. The regenerated silk ngwọta na-anọgide n'otu bughi mgbanwe ike si random eriri igwe na α -helix Ọdịdị ka β -sheet Ọdịdị dị ka mbụ silk ngwọta, nke bụ oké egwu na-akwadebe nke siri ike ihe onwunwe formats.
Isiokwu 1 oke, ule na usoro nke lyophilized silk fibroin
Oke, Ule na Method Lyophilized Silk Fibroin
Category Materials / Agents
ụdị Lyophilized mmadụ
ngwugwu 20 ml penisilini Karama
Method nke nchekwa Echekwara na a akọrọ, ventilated ebe na ụlọ okpomọkụ
Solution ịta mgbe rehydration ≤ 40%
Bioburden igba ogwu na
molekụla arọ ≥ 200,000 Da
Ụbọchị mmebi 18 ọnwa
O peration usoro:
Lyophilized silk fibroin nwere ike ịchekwa na ụlọ okpomọkụ 18 ọnwa. Tupu were, mmiri ma ọ bụ echekwa ma ọ bụ cell / ọgwụ ngwọta e nwere ike kwukwara n'ime ndị akpali mmasị karama eji a agịga ntụtụ (na-akara) ma ọ bụ a pipette (oghe karama). The lyophilized silk achicha na karama nwere ike ngwa ngwa rehydrated akpụ a ìhè edo edo ngwọta na silk kasịnụ nwetara nwere ike iru ruo 30-40%.
Otu dị ka ihe ngwọta mgbe ọcha, na soluble lyophilized silk fibroin nwekwara ike-eji dị ka a isi akụrụngwa n'ihi Ụgha nke ọtụtụ Biomedical ngwaahịa. Ọzọkwa, soluble lyophilized silk fibroin nwere uru nke ogologo na ihere nchekwa, mfe njem na elu ịta nke regenerated ngwọta iji tụnyere mgbe silk fibroin ngwọta.
Previous: Na situ akpụ Silk Fibroin jel Kit
Next: Silk Fibroin akpụkpọ
Lyophilized Silk Fibroin
Lyophilized silk Fibro na ntụ ntụ
Lyophilized silk Fibroin Protein ntụ ntụ
Lyophilized silk Protein ntụ ntụ
soluble Lyophilized silk Fibroin ntụ ntụ
soluble Lyophilized silk Fibroin Protein ntụ ntụ
soluble Lyophilized silk Protein
soluble Lyophilized silk Protein ntụ ntụ